HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mizo Mooré Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zoloa Éwé
“Asio fiheverana ny zokiolona.”—LEV. 19:32.
Ahoana no fiheveran’i Jehovah an’ireo be taona tsy mivadika aminy?
Inona avy no adidin’ny Kristianina amin’ny ray aman-dreniny be taona?
Inona no azon’ny fiangonana atao mba hanajana an’ireo be taona eo anivon’izy ireo?
1. Inona no manjo ny olona rehetra?
TSY nataon’i Jehovah hijaly noho ny fahanterana mihitsy isika. Tiany ho salama tsara kosa ny olona sady hiaina ao amin’ny Paradisa. “Mbola miara-mitoloko sy miara-mijaly foana [anefa] ny zavaboary rehetra mandraka ankehitriny.” (Rom. 8:22) Mba ahoana re no tsapan’Andriamanitra rehefa mahita ny vokatry ny ota eo amin’ny olona e? Maro koa ny be taona tsy misy miraharaha, nefa rehefa antitra ny olona no tena mila ampiana.—Sal. 39:5; 2 Tim. 3:3.
2. Nahoana ny Kristianina no tena manaja ny be taona?
2 Faly ny mpanompon’i Jehovah satria misy zokiolona eo anivon’ny fiangonana. Mahasoa antsika ny fahendren’izy ireny, ary mampahery antsika ny finoany. Maro amintsika no manana havana be taona. Mitady izay hahasoa an’ireo be taona malalantsika anefa isika, na havantsika izy ireo na tsia. (Gal. 6:10; 1 Pet. 1:22) Hodinihintsika izao ny fiheveran’i Jehovah azy ireo. Hojerentsika koa ny andraikitry ny fianakaviany sy ny fiangonana amin’ny fikarakarana azy.
“AZA ARIANA AHO”
3, 4. a) Inona no nangatahin’ny mpanoratra ny Salamo faha-71 tamin’i Jehovah? b) Inona no azon’ny zokiolona angatahina amin’i Jehovah?
3 Nitalaho tamin’Andriamanitra ny mpanoratra ny Salamo 71:9 hoe: “Aza ariana aho rehefa antitra, ary aza afoy aho, rehefa lany ny heriko.” Misy hoe “nataon’i Davida” eo amin’ny teny mampiditra ny Salamo faha-70, ary mety ho mbola tohin’izy io ny Salamo faha-71. Azo inoana àry fa i Davida no nanoratra ny Salamo 71:9. Nanompo an’i Jehovah izy, nanomboka tamin’izy tanora ka hatramin’izy efa antitra, ary nampanaovin’i Jehovah zavatra maro mahatalanjona. (1 Sam. 17:33-37, 50; 1 Mpanj. 2:1-3, 10) Mbola nangataka tamin’i Jehovah anefa izy mba hanampy azy foana.—Vakio ny Salamo 71:17, 18.
4 Maro ankehitriny no toa an’i Davida. Mbola midera an’i Jehovah araka izay fara heriny izy ireo, na dia efa mandroso taona sy miaina amin’ilay “andro mahory” resahin’ny Mpitoriteny aza. (Mpito. 12:1-7) Tsy mahavita ny vitany taloha intsony ny maro aminy, ohatra hoe tsy mahavita be amin’ny fanompoana. Afaka mitalaho amin’i Jehovah anefa izy ireo mba hahazo sitraka aminy sy hokarakarainy foana. Afaka matoky ireny be taona tsy mivadika ireny fa hamaly ny vavaka ataony i Jehovah. Mitovy amin’izay nampanahy an’i Davida sy nosoratany ao amin’ny Baiboly mantsy ny vavak’izy ireny.
5. Ahoana no fiheveran’i Jehovah ny zokiolona tsy mivadika?
5 Hita mazava tsara ao amin’ny Baiboly fa tena sarobidy amin’i Jehovah ny zokiolona tsy mivadika, ary tiany hanaja azy ireny ny mpanompony. (Sal. 22:24-26; Ohab. 16:31; 20:29) Hoy ny Levitikosy 19:32: “Mitsangàna raha eo anatrehan’ny fotsy volo ianao, ary asio fiheverana ny zokiolona, ka matahora an’Andriamanitrao. Izaho no Jehovah.” Tsy maintsy nanaja ny zokiolona teo anivon’ny fiangonana ny mpanompon’i Jehovah tamin’izany, ary toy izany koa ankehitriny. Iza anefa no tena tokony hikarakara azy ireny?
NY ANDRAIKITRY NY FIANAKAVIANA
6. Inona no modely navelan’i Jesosy?
6 Hoy ny Tenin’Andriamanitra: “Hajao ny rainao sy ny reninao.” (Eks. 20:12; Efes. 6:2) Nohamafisin’i Jesosy io didy io, rehefa nanameloka an’ireo Fariseo sy mpanora-dalàna izy noho izy ireo tsy nety nikarakara ray aman-dreny. (Mar. 7:5, 10-13) Modely ho antsika i Jesosy. Tamin’izy efa ho faty teo amin’ny hazo fijaliana, ohatra, dia nasainy nikarakara ny reniny i Jaona, ilay mpianatra tiany. Efa mpitondratena mantsy ny reniny tamin’izay.—Jaona 19:26, 27.
7. a) Inona no toro lalana nomen’i Paoly momba ny fikarakarana ray aman-dreny? b) Inona no noresahin’i Paoly ao amin’ny teny manodidina an’io toro lalana io?
7 Nahazo fanahy masina ny apostoly Paoly, ka nanoratra hoe tokony hanome izay ilain’ny ankohonany ny Kristianina. (Vakio ny 1 Timoty 5:4, 8, 16.) Diniho ny teny manodidina an’izay nosoratany ho an’i Timoty. Nilaza i Paoly hoe iza no mahafeno fepetra hahazo fanampiana ara-bola avy amin’ny fiangonana ary iza no tsy mahafeno fepetra. Nolazainy mazava tsara koa fa ny zanak’ireo mpitondratena efa be taona sy ny zafikeliny ary ny havany no tena tokony hikarakara azy. Tsy hampitondra enta-mavesatra ho an’ny fiangonana izy ireo amin’izay. Toy izany koa ankehitriny. Mikarakara izay ilain’ny havany sahirana ny Kristianina. Izany no ahitana fa ‘mahafoy tena ho an’Andriamanitra’ izy.
8. Nahoana no tsy voafaritra ao amin’ny Baiboly ny fomba tokony hikarakarana ray aman-dreny be taona?
8 Raha tsorina, dia manana andraikitra hanome izay ilain’ny ray aman-dreniny ireo zanaka efa lehibe. Ny havana mpino no noresahin’i Paoly, kanefa tsy tokony hatao tsirambina ireo ray aman-dreny tsy Vavolombelona. Samy manana ny fomba ikarakarany ny ray aman-dreniny isika. Tsy mitovy koa ny zavatra iainan’ny tsirairay. Samy hafa ny zavatra ilain’ny be taona sy ny toetrany ary ny fahasalamany. Eo ny manan-janaka maro, fa misy kosa tsy manana afa-tsy iray. Ny sasany mahazo fanampiana avy amin’ny fanjakana, fa ny hafa tsy mahazo. Tsy mitovy koa ny zavatra tiany. Tsy mety àry ny manakiana ny fomba ikarakaran’ny olona ny havany be taona. Azon’i Jehovah atao foana koa ny mitahy sy mampety an’izay fanapahan-kevitra raisina, raha mbola mifanaraka amin’ny Soratra Masina izany. Efa nanao izany izy tamin’ny andron’i Mosesy.—Nom. 11:23.
9-11. a) Inona no olana mety hatrehin’ny fianakaviana sasany? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.) b) Inona no mampiseho fa tsy mety ny maimaika hiala amin’ny fanompoana manontolo andro?
9 Mety hanahirana an’ireo zanaka ny hanome izay ilain’ny ray aman-dreniny be taona, raha mipetraka lavitra izy ireo. Mila tsidihina haingana angamba ireo ray aman-dreny, raha marary tampoka satria nianjera, na tapa-taolana, na misy olana hafa. Mety hila fanampiana izy ireo aorian’izay, ary mety ho vetivety izany na haharitra ela. *
10 Mety ho tsy maintsy handray fanapahan-kevitra sarotra ireo mpanompo manontolo andro mipetraka lavitra ny ray aman-dreniny. Anisan’izany ny Betelita sy ny misionera ary ny mpiandraikitra mpitety faritany. Sarobidy amin’izy ireo ny fanompoany, ary raisiny ho fitahiana avy amin’i Jehovah. Raha marary anefa ny ray aman-dreniny, dia mety hieritreritra avy hatrany izy hoe aleo miala amin’ny fanompoana ary mody mba hikarakara azy ireo. Ilaina anefa ny mandinika tsara raha tena ilain’ireo ray aman-dreny sy tena tiany izany. Tsara koa ny mivavaka momba an’ilay izy. Tsy misy tokony ho maimaika hiala amin’ny tombontsoam-panompoany, sady mety tsy hilaina akory izany matetika. Mety ho faly hanampy an’ireo ray aman-dreny ny rahalahy sy anabavy sasany eo anivon’ny fiangonany, satria mety ho vetivety dia sitrana ilay aretiny.—Ohab. 21:5.
11 Misionera tany Paragoay, ohatra, ny rahalahy iray, ary nanompo tany amin’ny foibe any Brooklyn, any New York, ny rahalahiny. Ny ray aman-drenin’izy ireo kosa tany Japon. Efa be taona izy mivady ary nila fanampiana. Nitsidika azy ireo àry izy roa lahy sy ny vadiny, mba hahitana izay nilain’izy ireo sy ny fomba tsara indrindra hanampiana azy. Nieritreritra ny hody sy tsy hanao misionera intsony ilay mpivady tany Paragoay. Niantso an-telefaonina azy ireo anefa ny anti-panahy mpandrindra tao amin’ny fiangonan’ny ray aman-dreniny. Nilaza izy fa rehefa nandinika ny anti-panahy, dia tian’izy ireo raha manohy ny asa misionera ela araka izay azo atao izy mivady. Nankasitraka ny fanompoana nataon’izy mivady ireo anti-panahy, ary tapa-kevitra fa hanao izay rehetra azo atao mba hanampiana azy ireo hikarakara ny ray aman-dreniny. Be fitiavana tokoa ireo anti-panahy ireo, ary tena nankasitrahan’ilay fianakaviana izany.
12. Inona no tokony hotandreman’ny fianakaviana kristianina, rehefa mifidy izay fomba hikarakarany ny ray aman-dreniny be taona?
12 Mila mitandrina ny fianakaviana kristianina mba tsy hisy zavatra manala baraka an’Andriamanitra ny fomba hikarakarany ny ray aman-dreniny be taona. Tsy te hanahaka ny mpitondra fivavahana tamin’ny andron’i Jesosy isika. (Mat. 15:3-6) Tiantsika kosa raha manome voninahitra an’Andriamanitra ny fanapahan-kevitra raisintsika, sady tsy manala baraka ny fiangonana.—2 Kor. 6:3.
13, 14. Inona no porofo ara-baiboly ahitana hoe tokony hikarakara ny be taona eo aminy ny fiangonana?
13 Tsy ny rehetra no afaka manampy ny mpanompo manontolo andro toy ny voalaza tetsy aloha. Maniry hanome izay ilain’ny be taona tsy mivadika anefa ny fiangonana. Hita tamin’ny zava-nitranga tamin’ny taonjato voalohany izany. Nijanona tao Jerosalema mba hanatanjaka ny finoany ny olona sasany, rehefa lasa Kristianina tamin’ny Pentekosta taona 33. Milaza ny Baiboly fa “tsy nisy nahantra” teo anivon’ny fiangonan’i Jerosalema. Tsy nanan-karena daholo koa izy ireo. Toa nahantra ny sasany, nefa nisy zavatra “nozaraina tamin’ny tsirairay araka izay nilainy avy.” (Asa. 4:34, 35) Nipoitra ny olana tatỳ aoriana. Re hoe “natao tsirambina ny mpitondratena” sasany, “tamin’ny fizaran-tsakafo isan’andro.” Nanendry olona àry ny apostoly mba hifidy lehilahy mahafeno fepetra. Izy ireny no nikarakara izay nilain’ny vehivavy mpitondratena, ka nahazo sakafo ampy izy ireo ary tsy nisy niangarana. (Asa. 6:1-5) Marina fa tsy naharitra ilay fizaran-tsakafo, satria natao hanampiana ny olona sasany vao lasa Kristianina. Hita tamin’izay nataon’ny apostoly anefa fa afaka manampy ny sahirana ny fiangonana.
14 Efa hitantsika tany aloha fa nolazain’i Paoly an’i Timoty ny zavatra takina amin’ny mpitondratena mba hahazoany ny fanampian’ny fiangonana. (1 Tim. 5:3-16) Notarihin’ny fanahy masina koa i Jakoba mba hanoratra fa adidin’ny Kristianina ny mikarakara ny kamboty sy ny mpitondratena ary ny olon-kafa mijaly na sahirana. (Jak. 1:27; 2:15-17) Hoy koa ny apostoly Jaona: “Raha misy manam-pananana eto amin’ity tontolo ity, ka mahita ny fahantran’ny rahalahiny, nefa mandà tsy hangoraka azy, ahoana moa no hitoeran’ny fitiavana an’Andriamanitra ao aminy?” (1 Jaona 3:17) Koa raha ny Kristianina tsirairay aza manana adidy hanampy ny sahirana, tsy mainka ve fa ny fiangonana?
Inona no azon’ny fiangonana atao rehefa misy be taona tratran’ny loza? (Fehintsoratra 15, 16)
15. Inona avy no mety hisy vokany eo amin’ny fanampiana omena an’ireo rahalahy sy anabavy be taona?
15 Misy fitondram-panjakana manome vola fisotroan-dronono ho an’ny be taona, sy manao fandaharana hanampiana azy, ary mampiasa olona mba hikarakara azy ao an-tranony. (Rom. 13:6) Tsy misy an’izany anefa any amin’ny tany sasany. Miovaova arakaraka ny zava-misy àry ny habetsahan’ny fanampiana tokony homen’ny havana sy ny fiangonana. Mety ho voafetra ihany ny azon’ny zanaka atao ho an’ny ray aman-dreniny, raha mipetraka lavitra izy ireo. Mila mifampiresaka tsara amin’ny anti-panahy ao amin’ny fiangonan’ny ray aman-dreniny àry izy ireo, mba ho fantatr’ireo anti-panahy ny toe-javatra misy an’ilay be taona sy ny zanany. Azon’ny anti-panahy resahina amin’ireo ray aman-dreny, ohatra, izay fanampiana omen’ny fanjakana na fikambanana hafa ho an’ny be taona, ary azony ampiana izy ireo hahazo izany. Mety hahamarika zavatra sasany tokony horesahina amin’ireo zanaka koa ny anti-panahy, ohatra hoe tsy misy manasa ny lamban’ilay be taona, na manadino fanafody izy, na tsy mety mankany amin’ny dokotera nefa marary. Ahafahana misoroka olana lehibe sy ahitana vahaolana tsara ny fifampiresahana toy izany. Tena afaka mampihena ny fanahian’ireo zanaka ny anti-panahy, satria tsy lavitra an’ireo ray aman-dreny, ka afaka manara-maso izay mitranga sy manampy ary manoro hevitra.
16. Inona no ataon’ny Kristianina sasany mba hanampiana ny be taona?
16 Misy rahalahy sy anabavy tena tia an’ireo be taona, ka mahafoy fotoana sy hery hikarakarana azy ireny araka izay vitany. Maneho fiheverana manokana an’ireo be taona izy ireny. Misy amin’izy ireo mifampizara an’izay asa ilaina hatao ary mifandimby mikarakara an’ilay be taona. Tsy afaka manompo manontolo andro ireny rahalahy sy anabavy ireny noho ny toe-javatra misy azy. Faly anefa izy ireo fa afaka manampy ny zanak’ireo be taona mba hanohy ny fanompoany, ela araka izay azo atao. Manana toe-tsaina tsara tokoa izy ireo. Mazava ho azy fa mbola tokony hanao izay vitany mba hikarakarana ny ray aman-dreniny ny zanaka, na dia manampy be toy izany aza ny hafa.
ILAZAO TENY MAMPAHERY IZY IRENY
17, 18. Nahoana no ilaina ny manana toe-tsaina tsara?
17 Tokony hiezaka ny rehetra mba hahatonga ny fikarakarana be taona hahafinaritra. Miezaha foana hifantoka amin’ny zavatra tsara, raha mikarakara be taona ianao. Mety ho kivy be ny olona sasany rehefa mihantitra, ary mety hitohy elaela izany. Mila miezaka be àry ianao raha te hanaja azy sy hiresaka zavatra mampahery foana. Tena mendri-piderana ireo be taona nazoto nanompo an’i Jehovah foana. Tsy manadino izay nataon’izy ireny i Jehovah, ary toy izany koa ny mpiara-manompo aminy.—Vakio ny Malakia 3:16; Hebreo 6:10.
18 Ho mora kokoa ny mizaka ny zava-tsarotra mety hitranga isan’andro, raha mivazivazy tsindraindray ilay be taona sy ireo mikarakara azy. (Mpito. 3:1, 4) Maro ny be taona miezaka mafy mba tsy ho sarotiny loatra. Fantany fa miankina amin’ny toetrany no mety hahatonga ny olona hazoto na tsy hazoto hikarakara sy hamangy azy. Matetika ny olona mitsidika be taona no milaza hoe: “Saika hampahery azy aho, nefa izaho indray no nampahereziny.”—Ohab. 15:13; 17:22.
19. Inona no azontsika rehetra antenaina, na tanora isika na antitra?
19 Tsy andrintsika ny hanafoanana ny fahoriana sy ny vokatry ny tsy fahalavorariana. Mila manantena foana an’ireo zavatra ho avy izay haharitra mandrakizay isika, eo am-piandrasana an’izany. Toy ny vatofantsika ny finoana ny fampanantenan’Andriamanitra, satria manampy antsika hiaritra rehefa misy zavatra mampahory na mampijaly. Manampy antsika ny finoana, ka ‘tsy kivy isika, fa na mihaosa aza ny tenantsika ivelany, dia azo antoka fa havaozina isan’andro kosa ny tenantsika anaty.’ (2 Kor. 4:16-18; Heb. 6:18, 19) Inona koa no afaka manampy anao raha mikarakara be taona ianao? Misy soso-kevitra azo ampiharina ao amin’ny lahatsoratra manaraka.
^ feh. 9 Misy soso-kevitra maromaro momba ny fikarakarana be taona ao amin’ny lahatsoratra manaraka.
Hizara Hizara Hajao ny Zokiolona eo Aminareo